Global Voices teny Malagasy » Vary Feno Cadmium Hita Ao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2013 16:01 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tontolo_iainana
Vary voapoizin'ny metaly mavesatra cadmium, antsoina amin'ny anaram-bositra hoe “vary cadmium” indray no fanafintohinana farany any Shina, miteraka fikoropahana sy fahatezerana eo amin'ny mpanjifa ao amin'ny firenena.
Ny sampan-draharaha misahana ny sakafo sy ny fanafody Guangzhou [zh] no nanambara  tamin'ny 16 Mey fa ny valo amin'ny santionam-bary 18 notsirihana tamin'ny tsena tao an-toerana no ahitana tahan'ny cadmium be loatra. Ny ankamaroan'ireo vary voapoizina dia avy any atsimon'i Hunan, faritany ao Shina mpamokatra vary indrindra.
“Ny Cadmium ao amin'ny vary matetika dia avy ao amin'ny tany naniriana sy nitomboany, ary ny tany dia voaloton'ny fakon-tsimika sy fakom-pitrandrahana,” hoy ny nambaran'i Fan Zhihong, manampahaizana manokana ao amin'ny Oniversitem-Pambolena Shina ao Beijing, tamin'ny gazety tantanin'ny fanjakana Global Times .
Nanatevin-daharana ny lisitry ny sakafo mampanahy tsy mitsaha-mitombo ao Shina tao anatin'ny taona vitsivitsy ny vary. Tamin'ny fanombohan'ity volana ity, naseho fa henam-boalavo sy henam-posa no nolazaina fa henan'ondry  tany Shanghai sy tany Jiangsu.
Efa olana naharitra am-polony taona maro ao Shina ny vary voapoizina. Araka ny Global Times, tetikasam-pikarohana iray tao amin'ny Oniversitem-Pambolena tao Nanjing no nahatsikaritra fa ny 10 isanjaton'ny vary amidy manerana ny firenena no miaty cadmium diso tafahoatra. Araka ny tatitra hafa, mahatratra hatramin'ny 70%-n'ny  tany (fambolena) ao Shina no voapoizin'ny metaly mavesatra sy ‘zezika’.
Saingy tsy mavitrika loatra amin'ny famoahana fahalotoana tahaka izany ny manampahefana. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity izao ny manampahefana misahana ny tontolo iainana no nitsipaka  ny fangatahan'ny mpisolovavao iray ao Beijing hamoaka ny ango-kevitra momba ny fahalotoan'ny tany ao Shina tamin'ny filazana fa “tsiambaratelom-panjakana” izany.
Nisy teny kely notsongain'ny gazetin'ny antoko komonista Isan'androm-bahoaka  niteny hoe:
Sarintanin'ny vary voaloto ao Shina nifampizarana fatratra tao amin'ny Weibo. (Sary avy amin'ny Weibo )
Ny sakafo miaty cadmium dia sakafo “tsy ialam-poizina”, izay raha amin'ny vanim-potoana mahazatra dia tsy miteraka fanairana hampisy fanahiana eo amin'ny resaka sakafo. Noho ny faneren'ny fampandrosoana ara-toekarena, misy ireo sampan-draharaha manakimpy ny masony amin'ireo orinasan-tsakafo mandika lalàna. Toa tsy mba sazian'ny lalàna izy ireo ary mbola mitazona ny toerana misy azy.
Ho setrim-baovao dia namoaka sombin-taratasy ny sampam-baovao ofisialin'ny fitondrana Shinoa Xinhua, izay nampitondraina ny lohateny  [zh] hoe, “Mandrisika ny olona tsy hihinam-bary avy amin'ny faritra iray ihany mandritra ny taona ny manampahaizana manokana,” ary tokony hanamaro ny fiavian-toeran'ny vary novidiany ny olona mba hampihenana ny risika.
Niteraka tsikera teo amin'ny sehatry ny serasera izany toro-hevitra izany. Tao amin'ny fanaovana bilaogy bitika shinoa malaza iray ny mpiserasera antsoina hoe “Bolin” no nanoratra tamin'ny tarehy ratsy manao  hoe [zh]:
Nilaza tamintsika ny isan'androm-bahoaka fa ara-dalàna ny fivarotana sakafo voapoizina. Amin'ny alalan'ny fihinanana karazan-tsakafo misy poizina isan-karazany no mba tsy ahafatesantsika amin'ny karazan-tsakafo misy poizina tokana.
Nanome ako  izany ny mpanoratra iray mipetraka any Shanghai antsoina hoe “Lei Wenke” [zh]:
Midika ve izany hoe tokony lanjalanjaintsika ny karazana fahalotoana isan-karazany?
Nanontany  Nanontany tamin'ny alalan'ny fandaharan-teny ny mpandala ny tontolo maitso iray Dong Liangjie:
Tsy vary cadmium ihany no misy eny an-tsena fa ahitana vary firamainty sy vary arsenika ihany koa eny; ny sasany ahitana taharo shimika roa be loatra indray miaraka. [Ny vary voapoizina] tsy avy any Hunan ihany fa misy ihany koa avy any Hubei, Jiangxi, Guangxi, Guangdong, Henan, Hebei, ary ny faritany hafa. Tsy hoe vary an'aliny taonina ihany fa an-tapitrisany taonina. Vary maro dia maro avy amin'ny toerana maro dia maro, ahoana moa ny fomba ivilianao ho any amin'izay hohanina? Tsy manaraka ifotony any amin'ny fototry ny olana na miresaka ny marina momba azy ity ny manampahaizana efa ao anatin'ny rafitra; mampiasa ny volan'ny mpandoa hetra ry zareo ary miezaka ny hampitodika ny fifantohan'ny olona. Fa lasa aiza ny etikan'ny fahaiza-miasa?
Olona manana ny toerany aty amin'ny serasera sy mpitsikera amin'ny tambajotra antsoina hoe “Xue Manzi” no nanolo-kevitra  fa tokony atao lisitra ny lanjan'ny metaly mavesatra entin'ny vary:
Lasa nahazo ny fifantohan'ny firenena iray manontolo ny vary voaloto noho ny fahitana ny fahabetsahan'ny cadmium tafahoatra. Mba isian'ny fahazoana antoka ara-tsakafo, mametraka aho mba asiana ny lanjam-piatian'ny metaly mavesatra avokoa isaky ny gonim-bary sy ny lafarinina. Tsy tianay hiverina ny zava-nitranga tamin'ny raharahan'ny vovo-dronono nafarana avy any ivelany  [mg]. Afa-mivimbina vovo-dronono isika, fa mavesatra loatra ny vary sy ny lafarinina raha vimbinina [avy any ivelany]. Fa amin'ny alalan'ny fametrahan pirinty izany fampahafantarana izany no ahatsapanay ho mahazo antoka amin'ny fihinanana azy. Misy manohana ny hevitro ve?
Nitaraina  [zh] Mitaraina ny mpisera iray “Beiou jixu mengxiang zhilv”:
Rehefa misy fositra ny rivotra, rano ary ny sakafo dia tsy afa-mihinana sakafo lavitry ny loto isika, fa miady amin'ny sakafo voapoizina mba ahafantarana hoe hatraiza ny fetran'ny poizina azo ampidirina amin'ny vatan'ny vahoaka Shinoa!
Caijing Commentator Ye Tan miantso ny  [zh] governemantan'i Hunan mba hangarahara kokoa momba ny fiarovana ara-tsakafo. Saingy, raha ny asehon'ny sarintanin'ny vary voaloto ao Shina dia tsy voafetra ao Hunan ihany ity olana ity fa hita ao Shina amin'ny ankapobeny:
Tokony hiasa amin-kitsipo amin'ny famahana ny olana amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny vahoaka ny fitondrana ao Hunan. Raha tsy misy fampahafantarana mangarahara sy famantarana ny fahalotoana ataon'ny metaly mavesatra amin'ny nofontany dia tsy hahay hanavaka ny vary voapoizina amin'ny vary tsy voapoizina vokatra ao Hunan ny mpanjifa. Ny fomba tsotra ho azy ireo dia ny miala amin'izay rehetra mety ho vary avy any Hunan. Raha misy ny fampahafantarana atao amin'ny vahoaka dia mety ho azo sarahana ho misy vary voapoizina sy vary madio ny varin'i Hunan. Raha tsy misy ny fampahafantarana atao amin'ny vahoaka dia hiatrika krizin'ny (tsy) fitokisana i Hunan. Ho lasa haolo ny tany, izay manana ny 13%n'ny tanimbary ao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/30/48759/
 hatramin'ny 70%-n'ny: http://www.chinaeconomicreview.com/report-lasting-damage-chinas-soil
 Nanome ako: http://weibo.com/wenxiao719
 raharahan'ny vovo-dronono nafarana avy any ivelany: https://mg.globalvoicesonline.org/2013/03/17/46481/
 miantso ny: http://blog.sina.com.cn/s/blog_53da16670102ec2n.html